UGodongwana nemizamo yokulekelela izakhamuzi ukuthi zingaklinywa yizindleko zempilo. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Ethula iSabelomali sonyaka wezimali wango-2022/23 izolo, uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana uthe bazobonisana ngaloku noNgqongqoshe wezokuMbiwa Phansi namaNdla uMnu uGwede Mantashe.
ISabelomali sigxile ekuzameni ukulekelela abantu ukuthi kwande imali abasala nayo njengoba intela ebanjwa emholweni, ekhokhela impahla, phecelezi i-VAT, nekaphethroli inganyuswanga.
Isiyonke imali ezokongiwa ngabakhokhintela ngaloku wuR5.2 billion. Enye ingxenye yale mali izolekelela ukukhuthaza izinkampani ukuthi zivule amathuba emisebenzi.
“Ngo-2021, inani likaphethroli ezindaweni ezimaphakathi leqe kuR20 ilitha. La manani aphezulu afake ingcindezi ezindlekweni zezokuthutha, ukudla nezinye izimpahla. Ukuphungulela abantu umthwalo, ngeke inyuswe intela ebanjwa kuphethroli nodizili ngo-2022/23. Loku kuzosiza izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ngoR3.5bn ezingeke ziwukhokhe.
“Ngeke futhi inyuke nentela yeRoad Accident Fund (isikhwama esinxephezela abalimale noma imindeni yabafe ezingozini zomgwaqo). Sesivumelene noNgqongqoshe uMantashe ukuthi kudingeka ukuthi kubuyekezwe yonke into ethinta intengo kaphethroli. Amathimba ethu aseqalile ukubonisana ngalo msebenzi omqoka,” kusho uGodongwana.
Omunye umzamo ngowokunciphisa izinga lentela ebanjwa emholweni, njengoba selizoma ku-4.5% ukuhambisana namandla emali. Loku kusho ukuthi ukukhokhiswa komuntu intela sekuzoqala kumuntu ohola uR91 250 ngonyaka (noma uR7 604 ngenyanga), esikhundleni sikaR87 300 (noma uR7 275 ngenyanga) kubantu abaneminyaka engaphansi kwewu-65.
Imali okunxeshezelwa ngayo abakhokhela umshwalense wezempilo ozimele izokhuphuka ibe wuR347 ngenyanga ngamalungu amabili okuqala bese kuthi kwalandelayo kube wuR234 ngenyanga.
Intela yokukhuthaza abaqashi izonyuka ngo-50% ibe wuR1 500 ngenyanga, okufanele ukuthi kusize abaqashi ngoR2.2bn. Eminyakeni emithathu ezayo kwabiwe uR76bn ukuxhasa izinhlelo ezihlukene zokusungula imisebenzi kanti kukhona noR18.4bn wezinhlelo zomsebenzi eziholwa yiHhovisi likaMengameli.
Olunye usizo olutholwe yizinkampani wukwehliswa kwezinga lentela ezibanjelwa yona njengoba incishisiwe isuka ku-28%, iya ku-27%.
Nokho-ke akuyona yonke intela engeke inyuke njengoba ebanjwa kugwayi notshwala izonyuka ngo-4.5% iya ku-6.5%. Kanti nebanjwa emalolini nakhipha umoya ongcolile omningi izonyuka.
Izodla ugwayi kwababhemayo nabaphuzayo ngentela abayikhokhayo
UGodongwana uthe nakuba imali ezoqoqwa wuhulumeni ekupheleni konyaka wezimali wango-2021/22 izoba ngaphezulu ngoR182bn uma kuqhathaniswa nonyaka wezimali odlule kodwa loko akukasho ukuthi sekufanele isaphazwe imali. Uthe isimo somnotho waseNingizimu Afrika sisesibi njengoba ethe umnotho kulindeleke ukuthi ukhule ngo-2.1% kulo nyaka bese kuthi eminyakeni emithathu ezayo kube okungenani wu-1.8%.
Uphinde wakhala nangesikweletu sezwe nezindleko zaso. Nokho umemezele izinhlelo zokuqala ukusinciphisa kusukela ngo-2022/23.
“Isikweletu sethu sisaloku siyinto esikhathaza kakhulu. Kulo nyaka isikweletu sikahulumeni sifinyelele kuR4.3 trillion kanti kubhekwe ukuthi sikhuphuke sifinyelele kuR5.4trn eminyakeni emithathu ezayo.
“Le mali engaka siyikweleta abantu lapha ekhaya nasemhlabeni jikelele. Inezindleko ezinkulu ezilinganiselwa kuR330bn ngonyaka kule minyaka emithathu ezayo. Le mali ingaphezu kwemali esiyisebenzisela ezempilo, amaphoyisa nemfundo eyisisekelo. Kungenxa yaloku nokweseka ukuvuselela umnotho sizonciphisa imali esishodelayo nesikweletu.”
Ungqongqoshe uthe ukushoda kwemali ngenxa yezindleko ezidlula imali engenile kulindeleke ukuthi kunciphe kusuka ku-5.7% womnotho ngo-2021/22 kuya ku-4.2% ngo-2024/25. Uthe kufanele imali engenayo ibe ngaphezu kwezindleko ezingenanzalo ngo-2023/24.
Isikweletu kulindeleke ukuthi sibe wu-75.1% womnotho wezwe ngo-2024/25, nokungaphansi ngo-3 percentage points kunokwakulinganiswe eSabelweni saPhakathi noNyaka weziMali.
“Okokuqala kusukela ngo-2015, sizonciphisa imali esizoyiboleka ngenxa yemali ethe xaxa esiyiqoqile. Imali okuzodingeka ukuthi siyiboleke izokwehla ngoR135bn kulo nyaka kuthi eminyakeni emibili ezayo yehle ngoR131.5bn.
UGodongwana uphinde wakhala ngamabhizinisi kahulumeni, athe asetakulwe ngoR308bn. Uthe kuzomele la mabhizinisi aqhamuke namaqhinga okushintsha unyawo. Uthe uyaqhubeka umsebenzi wethimba eliwabuyekezayo njengoba amanye ezoncishiswa, kuthi amanye ahlanganiswe.
Elinye lala mabhizinisi elingasebenzi kahle yi-Eskom esilekelelwe ngoR136bn ukuthi inciphise isikweletu. Uthe izohlinzekwa ngo88 bn eminyakeni emibili ezayo ukuze iqhubeke ukukhokhe isikweletu.